Tusaha Bilowga ee Doorashada Habka E-Liquid ee Da'da ah • Daroogada Inc.eu
E-dareere, oo badanaa loo yaqaan “casiir la cabbo” adhiga”, Waa dareeraha soo saara uumiga ku jira uumiga iyo aaladaha kale ee uumiga. Waxay u kala qaybsamaan dhowr kala -soocid, ugu muhiimsanina waa daruuraha uumiga ay soo saaraan ama waxa ku jira nikotiinta. Waxay noqon kartaa wax yar oo cabsi gelin iyo walaac leh haddii aad hadda uun soo iibsatay aaladdii ugu horraysay ee vape oo aad hadda raadinayso cabitaanka vape ee ugu fiican xirmadaada.
1 Sideed u dooran kartaa dareeraha elektaroonigga ah ee ku habboon uumiyahaaga?
1.1 U tag tayada, maaha qiimaha
1.2 Eeg faallooyinka internetka
1.3 Ogow saamiga u dhexeeya propylene glycol (PG) iyo glycerine khudradda (VG)
1.4 Tixgeli heerka nikotiinka
1.5 Isku day inaad hesho waayo -aragnimada dhadhan kala duwan
2 Ugu dambeyntii
Xaggee ka bilowdaa alaabooyin badan oo cusub oo suuqa ku dhufanaya ku dhawaad ​​maalin kasta? Sideed ku heleysaa dhadhanka aad ugu jeceshahay e-dareere? Waa hagaag, waa wax la fahmi karo in xulashada cabitaanka vape faa'iido leh ay kugu adkaan karto. Laakiin mar dambe maahan. Ku quuso si aad u ogaato sida loo helo cabitaanka vape ee ugu fiican fadhiyadaada vape -ka ee nasashada leh.
Sideed u dooran kartaa dareeraha elektaroonigga ah ee ku habboon uumiyahaaga?
Marka la go'aaminayo dareerayaasha vape ee la baadho, kuwa laga bilaabo adhiga dareen cabsi gelinta doorashooyin badan oo kala duwan. Akhri talooyinka hoose si aad u fahanto dareeraha vape -ga ee ku habboon dookhyadaada oo ka dhig khibrada wax yar:
U tag tayada, maaha qiimaha
Vaping-ku waxay ku lug leedahay maalgalin hore oo macquul ah xagga qalabka iyo dareeraha elektarooniga ah. Si kastaba ha noqotee, isku dayga inaad lacag ku keydiso iibsashada dareeraha elektaroonigga ah ee jaban ma aha ikhtiyaarka ugu fiican. Ka digtoonow sicirka dareeraha elektaroonigga ah oo u muuqda mid aad u wanaagsan inaan run ahayn. Alaabooyinkaan waxaa laga yaabaa inaysan la kulmin heerarkaaga tayada, taas oo saameyn karta dhammaan khibradda uumiga.
Casiirrada vape -ga wanaagsan ayaa xoogaa ka qaalisan maaddooyinka maaddooyinka qaaliga ah oo fadhiga ka dhiga mid xiiso leh oo wax ku ool ah. Waxaa lama huraan ah in la iibsado cabitaanno tayo sare leh oo kaliya maadaama ay meesha ka saaraan maaddooyinka waxyeellada leh iyo dhadhannada keeni kara xanuunka oo lala xiriiriyay dhibaatooyin caafimaad oo leh isticmaalka muddada-dheer.
Taas macnaheedu maaha inaad kharash garayso ee dareeraha elektarooniga ah taasi aad bay u fiican tahay inay run noqoto. Ka raadi shirkado bixiya tayo qiimo jaban. Warshadaha dareeraha elektaroonigga ah ayaa sii kordhaya oo shirkaduhu waxay la imanayaan badeecado u dhigma qiimaha. Kahor intaadan wax iibsan, samee xoogaa cilmi baaris ah oo wax ka baro kharashyada caadiga ah ee dhadhan kasta iyo dareeraha elektaroonigga ah.
Haddii aad raadineyso meelo kale oo la awoodi karo si aad u iibsato casiirka vape, sidoo kale waad raadin kartaa e-dareere raqiis ah oo iib ah. Halkaas waxaad ka heli doontaa cabitaanno badan oo tayo sare leh oo lagu iibiyo qiimo jaban.
Laakiin, sidee baad u dooran kartaa e-dareeraha saxda ah uumi bixiyehaaga? (afb.)
Eeg faallooyinka internetka
Soo-jeedinta ugu weyn ayaa ah in la fiiriyo kooxaha is-weydaarsada dib-u-eegista internetka si loo qiimeeyo tayada iyo dhadhanka e-juice marka ay timaaddo iibsashada. Isticmaalayaal badan oo xamaasad leh oo adduunka oo dhan ah ayaa ka fiirinaya e-dareeraha shirkado kala duwan waxayna la wadaagayaan fikirkooda ku saabsan faa'iidooyinka iyo waxa aysan ka helin sumadda. Faa'iidada qiimayntani waa inay ku siiyaan aragti aad ka filan karto xulashooyinka jira.
Kooxahan iyo kanaalada ayaa sidoo kale bixiya talooyin iyo farsamooyin waxtar u leh hagaajinta dhadhanka iyo tayada dareeraha elektaroonigga ah, sida hababka wax-ku-shubidda. Dib-u-eegista internetka waxay kaloo bixiyaan macluumaad qoto dheer oo ku saabsan dookhyada cusub iyo qiimayaasha, kuwaas oo kaa caawin kara inaad samayso xulashooyin xog-ogaal ah.
Ogow saamiga u dhexeeya propylene glycol (PG) iyo glycerine khudradda (VG)
Haddii casiirku hodan yahay VG, PG ama isku darka, waxay saamayn doontaa khibradaada uumiga. Marka la neefsado, mid kastaa wuxuu soo saaraa dareen gaar ah oo beddeli kara dhadhanka garaacaaga iyo uumiga soo baxaya. Kuwa bilowga ah badankoodu waxay doorbidaan casiirka VG ee hooseeya maxaa yeelay waxay leeyihiin saameyn aad loo yaqaan. Haddii aad rabto saamayn dabacsan oo leh daruuro aad u waaweyn, waxaad kaloo raadin kartaa cabitaanno ay ku jiraan VG sare.
Tixgeli heerka nikotiinka
Casiirka kala duwan ayaa kala duwan xaddiyo nikotiin ah. Haddii aad u baahan tahay helitaanka nikotiinta oo la mid ah habka caadiga ah ee wax -cunidda, waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaad u tagtid dareere ka kooban waxyaabo nikotiin ka badan. Dareerayaal badan ayaa la heli karaa iyada oo aan lahayn nikotiin, kaas oo uu doorbidayo in uu sameeyo kalkaaliye cusub. Go'aanso haddii aad doonayso nikotiin ku jirta dareerahaaga elektarooniga ah, haddii ay sidaas tahay, inta nikotiin ee aad rabto.
Isku day inaad hesho waayo -aragnimada dhadhan kala duwan
Tijaabinta dhadhanka kaladuwan ee e-juice waa habka ugu wanaagsan ee laguugu heli karo midka kugu habboon. Waxaa jira ikhtiyaarro dhadhan oo dhowr ah oo suuqa ku yaal, kuwaas oo qaarkood yihiin isku -darro adag oo ka dhiga xulashada dhadhanka ugu habboon mid aad u adag laakiin soo jiidasho leh.
Baar dhadhanka aad jeceshahay oo raadi e-dareere leh sifooyin dhadhan oo isku mid ah. Tusaale ahaan, haddii aad rabto berry, waxaad ka dooran kartaa blueberry, raspberry ama cherry. Waxaad kaloo tijaabin kartaa dhadhan kala duwan si aad fikrad fiican uga hesho waxa la heli karo.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la beddelo dhadhannada si looga fogaado helitaanka "carrabka dabaysha". Waxay tilmaamaysaa xaalad uu adeegsade la qabatimay dhadhan isku mid ah uu u horseedi karo dareen-darro xagga khiyaanooyinka e-dareeraha. Soo -dhoweeyeyaasha dhadhankaaga ayaa la qabsan kara dhadhanka, taasoo ka dhigaysa mid aad u adag oo daal badan waqti ka dib. Beddelka dhadhanka ayaa ka dhigi doona waayo -aragnimada uumigaaga mid cusub oo xiiso leh, oo kuu oggolaaneysa inaad sifeyso kuwa aad ugu jeceshahay.
Xitaa waxaad isku dari kartaa laba dhadhan si aad u abuurto dareeraha elektaroonigga ah ee ku habboon dhadhankaaga. Si aad uga dhigto saamiga kiimikada mid joogto ah, ku dheji isku darka dareeraha elektaroonigga ah ee isla sumadda.
Fahamka ahmiyadda qodobadan marka la dooranayo dareeraha elektaroonigga ah waxay gacan ka geysaneysaa qiimeynta dareerayaasha badan ee elektiroonigga ah ee ay bixiyaan noocyo kala duwan. Waxaad si dhaqso leh u yareyn kartaa nooca dareeraha elektaroonigga ah ee aad u baahan tahay haddii aad isticmaasho tilmaamaha kore si aad u go'aamiso shuruudahaaga. Markaa waxaad ku bilaabi kartaa safarkaaga adduunka xiisaha iyo kaladuwan ee dhadhanka elektaroonigga ah. Shantan talooyin ayaa kaa caawin kara inaad dooratid dareeraha elektaroonigga ah ee ugu fiican dhadhankaaga iyo dookhyadaada marka aad wax ka iibsaneysid dareeraha elektaroonigga ah.
hagecilmi baarissigaar cabinadhigauumi bixiye
Wadna xanuunka wadnaha ayaa sababa in wadnuhu si aan caadi ahayn u garaaco. Daawada loo yaqaan 'arrhythmias' uma shaqeyso qof walba iyo…
Gabar ka soo kabatay suuxdin daran iyada oo loo marayo xashiishka dawada ah
Toddoba jir jir ah oo qaba nooc ka mid ah suuxdinta oo dhif ah ayaa si la yaab leh uga soo kabsaday bilowgii ...